चीनको राजधानी बेइजिङमा १३ दिनदेखि कोरोना संक्रमण शून्य, प्रतिबन्ध भने धेरै ठाउँमा कायमै – Sandesh Munch
चीनको राजधानी बेइजिङमा १३ दिनदेखि कोरोना संक्रमण शून्य, प्रतिबन्ध भने धेरै ठाउँमा कायमै
July 19, 2020 134
एजेन्सी, ४ साउन । चीनको राजधानी बेइजिङमा विगत १३ दिनदेखि कोरोना भाइरस संक्रमणको कुनै घटना नदेखिएको जनाइएको छ । बेइजिङका एक अधिकारीले आइतवार भनेका छन, अब कोरोना भाइरस रोकथामका लागि बेइजिङमा आपतकालीन रोक लगाइनेछ ।
यद्यपि धेरै प्रतिबन्धहरू अझै लागु हुनेछन् । ग्लोबल टाइम्सको रिपोर्टका अनुसार ५० प्रतिशत आगन्तुकहरू मात्र संग्रहालय, जिम र पुस्तकालयको भ्रमण गर्न सक्षम हुनेछन्। प्रदर्शनी, खेल प्रतियोगिता र अन्य गतिविधिहरु पनि बिस्तारै सुरू गरिनेछ । सबै विदेशी पर्यटकहरूलाई परीक्षणको साथसाथै मेडिकल सुपरिवेक्षणमा राख्नुपर्ने र क्वारेन्टाइन गर्नुपर्ने प्रावधान लागू गरिने छ ।
आइतबार सिनजियांग प्रान्तमा कोरोना संक्रमणको १३ नयाँ घटनाहरू रिपोर्ट गरिएको छ । शनिबार प्रान्तीय राजधानी उरुमकीका एक अधिकारीले एक मिडिया ब्रीफिंगमा भनेका थिए, पूरा शहर कोरोनाबाट युद्धको मैदानमा लडिरहेको छ त्यसैले सबै सामूहिक गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाइनेछ ।
सिनजियांग प्रान्तमा घरमा आउने पाहुनाहरूको संख्या र ठूलो संख्यामा मानिस भेला हुन नदिन प्रतिबन्ध लगाइएको छ । भवनमा कोरोना भाइरस संक्रमणको कुनै मामिला भएमा मास स्क्रीनिंग अनिवार्य गरिएको छ।
सिनजियांग प्रान्तका मानिसहरूलाई यो महत्त्वपूर्ण नभएसम्म शहर छोडेर बाहिर नजान भनिएको छ। यदि शहर बाहिर जान आवश्यक छ भने पहिले परीक्षण गर्नुपर्ने जनाइएकोे छ ।
Prevप्रदेश १ मा आइतबारसम्ममा ८८ प्रतिशत कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज
Nextदुई घण्टादेखि बालुवाटारमा ओली र प्रचण्डको छलफल
वागमती प्रदेशकी उपसभामुख तामाङका आमाछोरा नै कोरोना संक्रमण मुक्त
आजदेखि फोन गर्दा पैसा लाग्दैन ! जिरो ब्यालेन्समा फेसबुक चलाउन र युट्युब हेर्न पनि मिल्ने (84090)
दुखद समाचार ! आखिर किन गरे त पारसले आत्मा हत्या ? (27648)
अत्यन्तै दु:खद खबर : भर्खरै कोरोनाको कारण दक्षिण अफ्रिकामा नवजात शिशुको मृ’त्यु ! RIP !!!! (13380)
भर्खरै कतारबाट आयो निक्कै ठुलो दुखको खबर, के भयो तेस्तो ? Watch Video (12589)
खुशीको खबर! बल्ल कोरना भाइरसको औषधी चीनले नै पत्ता लगायो ! (12343)
खुशीको खबर ! अमेरिकाले निकालेको औषधीले बिरामी चट्ट निको भएको हुदा पुरा अमेरिका खुशीको सिमा छैन हेर्नुहोस (11978)
अमेरिकामा कोभिड-१९ को खोप वितरण गर्न सेना परिचालन गरिँदै (11479)
दुखद खबर! सुत्केरीको मृत्यु भएपछि धुलिखेल अस्पतालमा सतर्कता! (10229)
खुशीको खबर! बल्ल कोरना भाइरसको औषधी चीनले नै पत्ता लगायो ! (9897)
श्रीमान सँगको डिभोर्ष पछि छोटो समयमै बनिन् करोड़पति (हेर्नुहोस भिडियो)
महाकाली पाथिभरा माता बोल्न थाल्नुभयो देशमाअनिष्ट हुदैछ